Wholesale Multicolor 13.3 inch Magetsi Shelf Label ESL mugadziri uye mutengesi | Zkong
-Name: Multicolor 13.3 inch Magetsi Shelf Label ESL
-Size: 13.3 ″
-Kumwe Kukura: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″
-Mutauro: Chinese, Chirungu, ChiFrench, ChiThai, ChiArabic, ChiSpanish, Chiputukezi nezvimwe.
-Battery Hupenyu: makore mashanu
-Ratidza: chena, nhema, tsvuku, yero, Bhuruu, Girinhi, pepuru nezvimwe
-Kushanda Tembiricha: 0 ~ 45 ℃
-Zitifiketi: ISO / CE / FCC / ROHS nezvimwe
-Function: Ratidziro yeruzivo, mwenje we LED, NFC, manejimendi ezvitoro nezvimwe
Iyo Cloud Multicolor Yemagetsi Shelf Label
Isu takagadzira iyo yemagetsi pasherefu chitaridzi (ESL) neChina inotungamira vatengesi Alibaba. Icho chaicho bhizinesi-kirasi mhinduro uchishandisa bluetooth, Wi-Fi, uye gore komputa tekinoroji, ichipa yakaderera kwazvo mutengo uye kuita kwakanyanya kwechero mutengesi weESL. Iyo yemagetsi pasherefu chitaridzi (ESL) inokwenenzverwa scalable uye yepakati yakakwenenzverwa kusvika kune risingagumi vhoriyamu, hapana server inodiwa muchitoro.
Iko kumanikidza pane zvekutengesa kuri kuramba kuchiwedzera. Nekuda kwekudiwa kwekuenzanisira e-commerce nemitengo yekutengesa, matekinoroji matsva anoteedzerwa. Izvo zvakanakira zvine simba uye zvakakwana mutengo manejimendi uku uchidzikisa basa mutoro zviri pachena. Iwe unogona nyore kugadzirisa mitengo maererano nevako vanokwikwidza kana kukudziridza chaiwo maitiro ekutenga.
Mitengo yekutenderedza haizi yemberi yekumberi asi ichokwadi. Vatengi vanowana mitengo yakatsaukana pane zvinowanzo fanika kupihwa kuburikidza nenzira dzakasiyana. Izvi zvinoda maturusi ekugadzirisa uye kururamisa akawanda eaya mageru. Pamusoro pezvo, yedu system inopa chaiyo, kuchengetedza nguva uye kugadzirisa zviwanikwa. Chinyorwa mutengo mutengo unogadziriswa inguva uye zviwanikwa zvinopedza zvisinei kana iri bhizimusi hombe, mutengesi wemotokari, supamaketi, chitoro chemafashoni kana bhizinesi diki. Ipa simba rako kuti uwanezve zviwanikwa izvi. Dhijitari mutengo wekugadzirisa pamberi-yakafara nemagetsi masherufu zvinyorwa zvino yave nyaya yemaminitsi kwete maawa.
E-commerce inowedzera kuwedzera kukwikwidza kumanikidza kune vatengesi uye inotungamira kune kazhinji kuwanda kwemitengo. Kuratidza mutengo watove nechinyakare kazhinji kunotungamira kukurumidza kurasikirwa kwekutenda kune vatengi, izvo zvisina muridzi webhizinesi anogona kuwana mune hupfumi wanhasi. Zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi zvinopa mukana wekutarisana nezvinodiwa nekuchinjika, kugadzirwa uye nemazvo. Kuchinja yechinyakare yemutengo wemapepa tag inotora maminetsi matatu, ayo anokurumidza anowedzera kusvika kumaawa akati wandei echitoro chese. Kunze kwekunonoka kwemitengo kuitiswa, kuwedzera kwemutengo uye yakanyanya kukanganisa mukana, mapepa emitengo emategi anogona kukonzera kukonzera kwakakura. Nekuda kwemhinduro pfupi, nguva dzemavara dzinogona kuvandudzwa panguva dzebhizinesi pasina kuisa njodzi pasherefu uye mutengo wemarejista wemari unoderedza zvichemo.
Ngatishandisei dhijitari yemutengo tag kugadzirisa zvese zvinhu zvinechinyakare mapepa tag ane.
Mashandiro anoita ESL?
ESL Bvumirana ne Cloud Platform
Zkong masayizi ese 23 Inch 35 inch 55 inch 65 Yakatambanudzwa LCD skrini kushambadza mutambi wadhijitari sigineti yekubata vhidhiyo vhidhiyo inoratidza
1. Chii chakaumbwa mune yese esl system?
Iyo inoumbwa neESL tag + base station + PDA scanners + software + inokwidza makiti ESL tags: 1.54 '', 2.13 '', 2.66 '', 2.7 '', 2.9 '', 4.2 '', 5.8 '', 7.5 '' , 11.6 '', 13.3 '', chena-nhema-tsvuku, bhatiri rinobviswa, Base chiteshi: batanidza ESL ma tag kune iyo yese system PDA scanner: sunga ESL ma tag uye zvigadzirwa Software: kutonga ESL system uye gadziridza template Kukwirisa kits: rubatsiro ESL ma tag akaiswa munzvimbo dzakasiyana
2. Chii chinonzi template yekuratidzira?
Template inotsanangura kuti ndeapi ruzivo acharatidzwa pane iyo ESL skrini uye sei. Kazhinji iratidziro yeruzivo izita rezvinhu, mutengo, mavambo, kodhi bar, nezvimwe.
3. Template inogona kugadzirwa?
Hapana chikonzero chekugadzirisa. Izvo zvinoonekwa kugadzirisa iyo template, zvakangofanana nekudhirowa nekunyora pabepa risina chinhu. Nesoftware yedu, munhu wese ndiye mugadziri.
4. Kana ndikatenga sampuli yekuyedzwa, chii chandinofanira kuteerera?
Pane zvasarudzo zviviri zvereferensi yako. a. Yekutanga mhando: 1 * Base chiteshi + akati wandei ESL ma tag + software b. Yakajairwa imwe: 1 demo kit bhokisi (ese marudzi ese eESL tag + 1 * base chiteshi + software + 1 * PDA scanner + 1 seti yekumisikidza makiti + 1 * bhokisi) * Ndokumbira utarise base base chiteshi chakakosha pakuyedzwa. Eedu ma ESL ma tag anogona chete kushanda neyedu base chiteshi.
5. Sei kutenga?
Chekutanga tiudze nezve zvaunoda kana kunyorera Chechipiri isu tichakutaurira zvinoenderana neruzivo rwako Chechitatu ndapota ita dhipoziti maererano nekoteti uye titumire isu bhangi bhiri Chechina kugadzirwa uye kurongedza kunozorongwa Pakupedzisira tumira zvinhu kwauri
Muenzaniso wekuenzanisira unowanzo kuve mazuva matatu kusvika gumi zvakarongeka Kurongeka kuri masvondo matatu
7. Zvakadii nezvevimbiso?
1 gore reESL
8. Iwe unopa ESL demo kit yekuyedza here?
Ehe. ESL demo kit inowanikwa, iyo inosanganisira saizi ese eESL mutengo ma tag, base base chiteshi, software uye zvimwe zvishongedzo.
Pashure: Multicolor 5.8 padiki Magetsi Shelf Label ESL
Tsika Yemavara Mateki
Dhijitari Labels Vagadziri
Dhijitari Mutengo Mavara
Dhijitari sherefu Matsamba Anotengesa
E Ink Shelf Chinyorwa
ZveMagetsi sherefu Edge Labels
Yemagetsi Shelf Label Vagadziri
NFC yemagetsi pasherefu chitaridzi
Pasherufu Edge Labels
Wireless Makaralı Tag pamwe NFC Epaper Price Ta ...